Ehime liin -China Yixinhe Trading
Ehime orange Mandarin uu leeyahay qaab wareegsan, midabka orange mugdi ah, unugyada saliid khafiif ah, siman, muuqaalka quruxda badan, ay fududahay in la dhilo. Sugar 15 °, acid 0.5 ° ka hooseeya, nuclear lahayn, ee dhadhamiya slag wanaagsan, udgoonka iyo cusboonaysiinta, dhadhan fiican. Adkaysi u kaydiyo, iska caabin ah oo qabow, dhalidda u fiican, natiijooyinka xarig ah, waa noocyo aad u rajo hore bislaada of liinta. hore Yaraynta acid, liinta Ehime in dhamaadka November dhadhan ugu fiican, laakiin bartamihii November suuqa. Ehime liinta iyo Nankou hagaagaan ...
Ehime orange Mandarin uu leeyahay qaab wareegsan, midabka orange mugdi ah, unugyada saliid khafiif ah, siman, muuqaalka quruxda badan, ay fududahay in la dhilo. Sugar 15 °, acid 0.5 ° ka hooseeya, nuclear lahayn, ee dhadhamiya slag wanaagsan, udgoonka iyo cusboonaysiinta, dhadhan fiican. Adkaysi u kaydiyo, iska caabin ah oo qabow, dhalidda u fiican, natiijooyinka xarig ah, waa noocyo aad u rajo hore bislaada of liinta.
hore Yaraynta acid, liinta Ehime in dhamaadka November dhadhan ugu fiican, laakiin bartamihii November suuqa. Ehime liinta iyo Nankou hagaagaan waqti isku mid ah, laakiin Ehime liinta ayaa slag curdan tahay more, oo uu leeyahay dubka sare sabayn lahayn, ka adkaan ayaa haddana ceebaha ay ku Nankou ee biyo yaraanta, Ehime waa kala duwan ugu wanaagsan ee bedeli of Nankou, ku haboon 16C sanadlaha heerkulka celcelis ahaan ° beerashada , sidoo kale waa noocyada ugu fiican ee ku laayeen waqooyi ee liinta.
Ehime Citrus waa fariida. Qaraabo u liinta kala duduwan guud hagaagaan muddo ah oo ku saabsan bil ama si. Wanaagsan si ay u buuxiyaan kaalinta bannaanaatay muddada suuqa liinta ah. goosashada Fruit sida ay maturity liinta midhaha, isticmaali, suuqa u baahan yahay si loo ogaado muddada beergooyska. marka Roobka iyo midhaha baasto qallalan uma soo qaado midhaha. shaqaalaha Fruit waa xidho gacno gashi, la magaabay wiil midhaha wareega si wada jaray miro la isku jirid midhaha, ka dibna la gooyaa pedicle midhaha, si tartiib ah. Si ka mid ah oo ka baxsan ka gudihiisa, top si hoose si ay u soo qaado midhaha. U baahan tahay oo dhan derbiga weel midhaha siman, guran midhaha waa in la isla markiiba qaado beerta baakada ama lagu kaydiyo. Iska ilaali qorraxda iyo roobka.
Shiinaha Ehime liin
Ehime liin Daad
Miraha Fresh Cirtus
Sale Mandarin Orange
Daad Ehime liin